जब बच्चन परिवारकी एकमात्र बुहारी ऐश्वर्याले दिइन् पूरा परिवारलाई यति ठूलो धोका !
यी व्यक्ति, जसलाई अभिषेकभन्दा धेरै माया गर्थिन् ऐश्वर्या
किन ऐश्वर्याका यी कुराहरु अभिषेकलाई अत्यधिक मन पर्छ ? खोले यस्तो राज
एजेन्सी । विभिन्न कारणले चर्चामा आइरहने ऐश्वर्या राय बच्चन पुनः एकपटक भारतीय सञ्चार माध्यमहरुमा छाएकी छिन् । पारिवारिक विवादका कारण पछिल्लो पटक ऐश्वर्यासँग अभिषेक पनि घर छोडेर फ्ल्याटमा सर्न लागेको बताइएको थियो
बच्चन परिवारकी एकमात्र बुहारी ऐश्वर्याले दिइन् पूरा परिवारलाई यति ठूलो धोका ? सुनेर होश उड्यो परिवारको
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन प्रायस् आफ्नी आराध्याको कारण चर्चामा रहने गर्छिन् । तर यो पटक ऐश्वर्याको बारेमा फैलिएको यो समाचारले धेरैको होश उडाएको छ ।
किन सबैको अगाडि हप्काए अमिताभले ऐश्वर्यालाई ? हेर्नुस् भिडियो
एजेन्सी । रजनीकान्त जस्ता सुपर स्टारको मन जित्न सफल ऐश्वर्या राय बच्चन यस्ती अभिनेत्री हुन् जसले आफ्नो फिल्मी करियरलाई मात्र होइन निजि जीन्दगीलाई पनि उीत्तकै महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेकी छिन् ।
४४ वर्षकी भइन् ऐश्वर्या, जान्नुहोस् उनको जीन्दगीसँग जोडिएको ९ खास कुरा
एजेन्सी । सुन्दरताको उदाहरण ऐश्वर्या राय बच्चन हिजो मात्र ४४ वर्षकी भइन् । सन् १९९४ मा उनले मिस वल्र्डको उपाधि जित्न सफल भएकी रायलाई विश्वमा सुन्दर युवतीमा गनिन्छ ।
यसकारण भइन् ऐश्वर्या ‘तालुखुइले’, भाइरल भयो तस्विर
एजेन्सी । बलिउड स्टार अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै छाइरहेका छन् । त्यसमापनि उनीहरुका फ्यान उनीहरुसँग जोडिएको हरेक कुरा जान्न निकै उत्सुक हुन्छन् । यसैबीचमा अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चनलाई लिएर एक खबर बाहिरिएको छ । जुन सुनेर तपाईको पनि होश उड्ने छ ।
होटेलको कोठामा भएको त्यो एक गल्ती, जसका कारण विवेकसँग टाढिइन् ऐश्वर्या
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अहिले बच्चन परिवारकी बुहारी भइसकेकी छिन् । तर तपाईलाई थाहा नै छ होला उनी त्यो भन्दा पहिले एश ओबराय परिवारकी बुहारी बन्नेबाली थिइन् । सवैलाई थाहा भएकै कुरा हो उनको र सलमान खानको सम्बन्धको बारेमा तर उनको र विवेक ओबरायको प्रेम सम्वन्धको बारेमा कमैलाई मात्र थाहा छ ।
होटेलको कोठामा भएको त्यो एक गल्तीले टाढिएकी थिइन् ऐश्वर्या विवेक ओबरायसँग
एजेन्सी । बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अहिले बच्चन परिवारकी बुहारी भइसकेकी छिन् । तर तपाईलाई थाहा नै छ होला उनी त्यो भन्दा पहिले एश ओबराय परिवारकी बुहारी बन्नेबाली थिइन् ।